Global Voices teny Malagasy » Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Jigme Tshewang · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Janoary 2014 20:00 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Bhutan, Mediam-bahoaka, bcmd, Rising Voices
Jigme Tshewang, mpandray anjara tao amin'ny Foibe Bhutan Hoan'ny Tetikasa podcast audio (Fandraisam-peo) Momba ny Media sy ny Demaokrasia, tetikasa vatsian'ny Rising Voices ara-bola.
Manan-tanjona amin'ny fiainana aho dia ny tokony hahafantaran'ny olona rehetra izay zava-mitranga ao anatin'ny vanim-potoanan'ny vaovao sy ny zo hahafantatra ihany koa. Tokony hiara-hiasa ho tombotsoan'ny daholobe isika rehetra satria manan-jo hahazo vaovao ihany koa izy ireo ary ny fianarana no fitaovana lehibe indrindra.
Iray amin'ireo fitsipika mpitari-dalana an'i Jigme Tshewang izay mpikambana ao amin'ny tetikasa fandraisam-peo karakarain'ny Foibe Bhutan Hoan'ny Media sy ny Demaokrasia , tetikasa nahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny Rising Voices 2013 io. Amin'ny maha-mpianatra ao amin'ny Oniversite Royal ao Bhutan  ao amin'ny Sampam-pampianarana Media azy, nandray anjara tamin'iray amin'ireo atrikasa fandraisam-peo notontosaina tao amin'ny Kolejy Sherubtse , Kanglung , Distrikan'i Tashigang i Jigme, izay nianarany momba ny fototra famoronana rafi-tantara, fandraketana ary ny famoahan-dahatsoratra.
Mpiavy avy ao amin'ny Distrikan'i Pemagatshel , monina ao amin'ny faritra Atsimon'i Bhutan fantatra amin'ny anarana hoe Samdrup Jongkhar izy ankehitriny, lalana indray andro miala ao amin'ny kolejiny.
Tamin'ny resadresaka tamin'ny mailaka niaraka tamin'ny Rising Voices, nilaza i Jigme fa hitany tena mahaliana tokoa ny fandraisam-peo noho ny fahaizan'ny tsirairay mitantara kokoa noho ny manoratra. Afa-mahatratra mpihaino bebe koka ihany koa ny feo noho izy takatry ny sarangam-piarahamonina mety tsy mahay manoratra sy mamaky teny. Azo zaraina amin'ny alalan'ny onjam-peom-paritry ny fiarahamonina ihany koa ny fandraisam-peo ary hahafahan'ireo tsy afaka miditra aterineto hihaino hevitra sy fomba fijery isan-karazany.
Mikasika ny fijerin'ny olom-pirenena Bhotaney momba ny fitsarana adin-tany tao Gyelposhing , izay naha-voampanga tompon'andraiki-panjakana ho nahazo ny tanin'ny mponina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny fandraisam-peon'i Jigme. Nahita i Jigme fa « marobe ireo olona nizara ny fijeriny fa ara-drariny ny fitsarana satria fantatr'izy ireo fa tokony hanjaka ny lalàna. Nizara ny alahelony ihany koa ireo olona sasany satria resy ny kandidàn'izy ireo tamin'ny fifidianana solombavambahoaka noho ity raharaha ity. “Mbola eo an-dalam-panitsiana sy famoahana ao amin'ny habaka ny fandraketam-peo .
Mikasika ireo fanamby sasany izay noresahana nandritra ny fandraketam-peo, nahita i Jigme fa sarotra ny mahita olona vonona hizara ny fijeriny. Hoy izy, «tsy dia malala-tsaina loatra ny olona Bhutaney raha ny fizarana ny olan'izy ireo no resahana.” Na dia izany aza, nahita izay olona ilaina vonona hampiasa ny feony hiresaka ireo olana lehibe amin'ny demaokrasian'i Bhutan ihany izy.
Raha ny fandraisam-peo no tena mahaliana voalohany an'i Jigme, niroboka tao anatin'ny tontolon'ny bilaogy sy ny tambajotra sosialy ihany koa izy. Mitantara ny eritreriny manokana sasany ny bilaoginy , ary misioka ao amin'ny @jigmetshewang  ihany koa izy.
Ireo zavatra iainany vaovao amin'ny aterineto ireo dia anisan'ny finoany fa tokony maro kokoa ireo olona tokony hahafantatra momba ny fireneny, Bhutan. Hoy izy:
Tiako ho fantatr'izao tontolo izao fa fantatra amin'ny maha “Firenen'ny Fahasambarana” manana kolontsaina tsy kolontsaina tsy voakitikitika voasedran'ny fotoana azy i Bhutan, sy tontolo iainana efa nisy hatramin'ny vanim-potoana voalohany ao anatin'ny Lalàmpanorenana tokana manerantany mitahiry sy miaro farafahakeliny 60%n'ny velarantany rakotr'ala mandritra ny fotoana rehetra hoavy.
Ny fitsipika bodista miaina amin'ny zavamisy no mahatonga ny vahoakanay hanana fiainan-tsambatra ary manome lanjany tokoa ny filôzôfian'ny fandrosoana an'ny Mpanjakanay Fahaefatra izahay izay nilaza hoe “Ny Harim-Pahasambaran'ny Firenena Faobe noho Manandanja kokoa noho ny Harin-Karena Anatiny Faobe”. Ho anay, tsy ny zava-drehetra tsy akory ny fiadanana ara-materialy sy hita maso ary omenay lanjany ny firaisankina amin'ny fiainana sy ny filaminana ao amin'ny fiarahamonina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/08/56532/
 Foibe Bhutan Hoan'ny Media sy ny Demaokrasia: http://bcmd.bt/
 Kolejy Sherubtse: http://www.sherubtse.edu.bt/
 Distrikan'i Pemagatshel: http://en.wikipedia.org/wiki/Pemagatshel_District
 Samdrup Jongkhar : http://en.wikipedia.org/wiki/Samdrup_Jongkhar
 fitsarana adin-tany tao Gyelposhing: http://www.bbs.bt/news/?p=22168